Nhau - Ndezvipi zvaunofanira kutsvaga kana uchitenga muchina wekukwasva
Kana iwe uchitsvaga yakaderera-inokanganisa nzira yekuwana yakakura Cardio Workout, usatarisa kumberi kupfuura iyo yekukwasva muchina. Kukwasva kwemukati kwakakura mukuzivikanwa sezvo boutique fitness makirasi akavakirwa pamushini abuda. Mamwe makirasi ezvitoro anotevera mamwe esimba-uye-cardio wedunhu fomati atanga kuisikidza nekukurumidza kuputika kwebasa pane rower sechikamu cheyakajairika Workout.
Kana uchitenga muchina wekukwasva kumba kwako, zvakakosha kuti uwane modhi inoenderana nezvinodiwa zvako. Nepo michina yekukwasva ichishandisa mhando dzakasiyana dzekumirisana- mvura, mhepo, uye magineti ndezvimwe zvakajairika - hapana hazvo imwe mhando yekudzivirira iri nani pane imwe, anodaro Jenna Langhans, NASM CPT uye murayiridzi kuCityRow NYC. "Zvinoenderana nekuti uri kutsvaga ruzivo rwakadii." Chinhu chimwe chete ichocho chinoenda kune zvimwe zvinhu, senge mhando dzema stats muchina unogona kuteedzera uye kana iine kana hombe ine inoratidzwa mukati. Izvo zvakakodzera kushandisa mari yakawanda pane zvinoenderana nemarongero aunoita kushandisa muchina.
Chinhu chimwe chakakosha, zvisinei kuti ndezvipi zvinhu zvine mutsindo zvaunoita kana zvausingasarudze, ndezvekuti iwe unotenga muchina wekukwasva wakagadzirwa zvakanaka, anodaro Cameron Yuen, DPT, CSCS, chiremba mukuru wemuviri kuBespoke Kurapwa. “Dzivisa kutenga mhando yepasi-soro. Mari inochengetwa haina kukodzera kuvakwa kwakashata, kutendeseka kwakashata, uye maficha, ”anodaro, achiwedzera kuti anokurudzira kusarudza muchina wepakati-wepakati. Mushure mezvose, iwe unoda kuve nechokwadi kuti muchina unokupa iwe yakanaka yekukwasva ruzivo kuitira kuti unyatsoda kuishandisa, anodaro. Mushini wakavakwa zvakanaka unogarawo kwenguva yakareba.
Nzira yakanakisa yekuyedza muchina wekukwasva ndeyokuishandisa iko kujimu kutanga. Nenzira iyoyo iwe unogona kuve nechokwadi chekuti yakasununguka uye ine maficha akakosha kwauri, Yuen anodaro. Kana iwe uchikwanisa kuyiyedza kunyangwe kungoita kuchitoro kana showroom usati waitenga, zvinobatsira zvakare. Kana iwe usingakwanise kuzviedza iwe pachako kutanga, verenga wongororo pamhepo, tarisa ese mavhidhiyo ayo brand inopa, uye fonera kambani kuti ubvunze yakawanda mibvunzo.
Uye kana iwe uchinge wawana yako yekukwasva muchina, ita shuwa kuti iwe unodzidza fomu chaiyo usati wasvetukira pa (chinyorwa ichi chinogona kubatsira kana iwe uchiri kuwana iko kurembera kwekukwasva). "Kukwasva kwakakodzera kunonetsa kudzidza, uye vanhu vazhinji vanoshandisa muchina zvisizvo," anodaro Ava Fagin, CSCS "Zviri nyore kukuvadza muzasi wako pamushini uyu kana usingakwanise kudzidza nemazvo." Chinhu chekupedzisira chaunoda kuseta yako nyowani, inopenya muchina uye wozozvikuvadza iwe nekukasira zvekuti haugone kana kuishandisa, handiti?
Kana uchitenga muchina wekukwasva, nyanzvi dzedu dzinopa zano rekutarisa pane akati wandei maficha kuti uve nechokwadi chekuti Workout yako ichave yakanaka uye ichikubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekurovedza muviri. Zvekutariswa kweSELF kwechigadzirwa, patinoyedza zvakasimba uye kuyedza mhando dzese dzezvigadzirwa zvehutano kuti ubatsire kusarudza zvakakodzera kutenga, takabvunza Langhans, Yuen, uye Fagin zvekutarisa mumuchina wekukwasva wemhando yepamusoro. Zvichienderana nezvavakaisa, hezvino zvatino teerera patinoyedza michina yekukwasva kuti uongorore.